Fari-dranomasina Toliara : sambo sinoa enina mampiasa harato 15 km | NewsMada
Fari-dranomasina Toliara : sambo sinoa enina mampiasa harato 15 km
Araka ny loharanom-baovao, ahitana sambo sinoa miisa enina, manjono any amin’ny fari-dranomasin’i Toliara, ankehitriny. Ahina ho tsy ara-dalàna izy ireo, sady tsy fantatra ny fiaviana sy ny alehany na ny itoerany, fa tsy miantsona ao amin’ny seranan-tsambon’i Toliara rahateo. Voalaza fa mampiasa harato lehibe mirefy hatrany amin’ny 15 km tsirairay avy ireo sambo miisa enina ireo, ary raofiny avokoa ny hazandranomasina rehetra azony.
Izany hoe tsy misy fepetra arahin’izy ireo anivanana ny karazana hazandrano fa raofin’izy ireo avokoa ny madinika sy ny vaventy. Entiny any ampovoan-dranomasina any ny vokatra azony ary azo antoka fa mety misy sambo lehibe hafa manangona ireo indray avy eo miondrana any ivelany. Tsy nahandrenesam-baovao mikasika ity ny tompon’andraikitra eto an-toerana.
370 tapitrisa euros isan-taona ny very
Matetika any amin’ny fari-dranomasina any amin’ny tapany andrefana avaratry ny Nosy sy any amin’ny ranomasimbe Indianina ny tena hanatraran’ny Foibe mpanara-maso ny jono (CSP) sambo manjono tsy ara-dalàna. Saika sambo aziatika avokoa ny ankamaroan’izy ireny. Manodidina ny 370 tapitrisa euros isan-taona ny sandan’ny hazandrano miondrana tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Miteraka fatiantoka ho an’ny firenena, indrindra ny harena voajanaharintsika izany. Tsy ampy rahateo ny fanaraha-maso, ny fitaovana toy ny sambo mpanara mason y morontsiraka, na efa nanampy azan y Vondrona eoropeanina (UE), I Etazonia ary i Sina. Hanamarinana izany, tsy fantatra na tsy ampahafantarina ny besinimaro ny vokatra vitan’ny tompon’andraikitra Malagasy.